‘कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नदिनु भ्र’ष्ट राजनीतिको चरम नमूना हो’ – मिश्र [ सहमत हुनेले एक शेयर गरौँ] – Dainik Sangalo
‘कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नदिनु भ्र’ष्ट राजनीतिको चरम नमूना हो’ – मिश्र [ सहमत हुनेले एक शेयर गरौँ]
September 16, 2020 488
साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति नदिनु भ्र’ष्ट राजनीतिको चरम नमुना भएको बताएका छन्। संयोजक मिश्रले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उदाहरण दिँदै पहिला सेवा गरेकाहरुलाई दोस्रो कार्यकालमा नियुक्ति दिन निवेदन माग नगरिने बताएका छन्। उनले कुलमानले असाधरण काम गरेको भन्दै उनलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु पद्दति नभई भ्र’ष्ट राजनीतिको चरम नमूना भएको बताएका छन्।
‘धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा २ वर्षको करार सेवा दिइन्छ। राम्रो काम गरे र नियमले नरोक्ने भए त्यसलाई खुसीसाथ नवीकरण गरिन्छ। ‘विज्ञापन गर्छौँ, तिमीले फेरि निवेदन देऊ’ भनिँदैन। कुलमानजीले त असाधारण काम गरेका हुन्। उनलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु पद्दति होइन भ्र’ष्ट राजनीतिको चरम नमूना हो’, मिश्रले ट्विटमा लेखेका छन्।
यसअघि मिश्रले अर्को ट्विटमा नेपाली राजनीतिमा अझै केही वर्ष ‘कुलमानहरू’ले हारेर ‘हनुमानहरू’हरुले जितिरहने बताएका थिए। घिसिङ आइतबार आफ्नो चारवर्ष कार्यकाल सकेर मंगलबार प्राधिकरणबाट बाट बिदा भएका छन्। सरकारले नयाँ कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने बताएको छ।
त्यस्तै,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा एमसीसीबारे उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ‘ट्रक, पानीजहाज वा रेलमा बिजुली पठाउन नसकिने’ बताएका थिए। उनको तात्पर्य थियो ‘बिजुली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन प्रसा रण नै चाहिन्छ, अर्को कुनै बिकल्प छैन’ । हालसम्म विश्वभर ट्रान्समिसन लाइनबाट नै बिजुली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाइने गरिएको छ ।
तर न्युजिल्यान्डको एउटा स्टार्टअप कम्पनीले भने प्रसारण लाइन बिनानै बिजुलीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिने प्रविधिको विकासमा सफलता प्राप्त गरेको जनाएको छ। ‘इमरोड’ नामको स्टार्टअप कम्पनीले विश्व कै पहिलो तार बिनाको प्रसारण लाइन प्रविधि विकास गरेको हो । यो प्रविधिबाट तार बिना नै लामो दुरीसम्म बिजुली पठाउन सकिने कम्पनीले जनाएको हो ।
न्युजील्याण्डको बिजुली वितरण गर्ने दोस्रो ठुलो कम्पनी ‘पावरको’ ले यो प्रविधिको परिक्षण गर्ने भएको हो । ‘इमरोड’ले हाल ‘पावरको’को लागि परिक्षणको लागि तयार पारिरहेको सिस्टमले केहि किलोवाट बिजुलीमात्र ट्रान्सफर गर्न सक्ने जनाएको छ। तर यहि प्रविधिबाट बिना तार जति पनि बिजुली , जति पनि दुरीमा पठाउन सकिने कम्पनीको दाबी छ ।
एन्टिना र रेक्टिनाको प्रयोगले यो सम्भव भएको बताईएको छ ।कम्पनीका अनुसार सुरुमा एन्टिनाले बिजुलीलाई ‘माइक्रोवेभ इनर्जी’ मा परिणत गर्छ, जुन रेडियो तरङ्ग जस्तै हुन्छ । त्यस पछि ति तरङ्गहरुलाई तार रहित तर निश्चित बाटो हुँदै बिजुली पुर्याउनु पर्ने रेक्टिनासम्म पुर्याईन्छ । त्यसपछि ति तरङ्गहरुलाई रिक्टिनाले पुन: बिजुलीमा परिणत गर्छ । हावाको माध्यम प्रयोग गरि बिजुली पठाईने र बिजुलीको बाटोमा हावा बाहेक (जस्तै व्यक्ति , चरा अथवा केहि) आएको खण्डमा बिजुली ट्रान्सफर त्यहि रोकिने र हातेपछि पुन: सुचारु हुने बताईएको छ । यसरी ७० प्रतिशतसम्म बिजुली गन्तब्य स्थानमा पुर्याउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
तारको माध्यमबाट हुने प्रसारणभन्दा यो कम गुणस्तर देखिएपनि ठुला टावर बनाउन नसकिनेस्थानमा भने यो प्रविधि लाभदायक हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले हाल ‘पावरको’ कम्पनीको लागि मोडल बनाईरहेको जनाएको छ । अक्टोबरसम्म सो कार्य सकिने र केहि महिना त्यसको परिक्षण गर्ने र त्यसपछि लामो दुरीमा परिक्षण गर्ने तयारी छ ।
Prev“म संग कोरिया जाने केटा चाहियो,ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला”
Nextकुलामानका बिषयमा छलफलका गर्न ओली र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, यस्तो भयो सहमति !
पहिरोले थुनिएको तामाकोसी खुलाउन चिनियाँ टोली परिचालन,खोला फुटाउने काम सुरु, नदीतटीय क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन
कुलमानलाई चाडो नियुक्ति गर भन्दै बिर गोर्खालीले हल्लाए काठमाडौं !
तु घर बिक्रीमा मात्र7लाख 99 हजार झुटो होईन, सिधै धनिको नम्बर सहित, छिटो हेर्नुस